Khasaaraha Dhabta Ah Ee Dagaalkii Shalay Tuko-rraq Ku Dhex-Maray Somaliland Iyo Maamulka Putland [Dhimashada Iyo Dhaawaca Labada Dhinac]
Wednesday May 16, 2018 - 09:59:57 in Wararka by Abdi A.
Hargeysa-(Caalami-News)-Iyada oo uu istaagay dagaalkii ka socdey aaga Tukaraq ee gobolka Sool ee u dhexeeyey ciidamadda qaranka Somaliland iyo kuwa maamul gobolleedka Puntland ayaa waxa Dagaalkaasi uu gaystay dhimasho iyo dhaawac badan.
In kasta oo ay adag tahay in la ogaado khasaaraha nafeed ee ka dhashey dagaalkaasi, balse Warar xoog ogaal ah ayaa sheegaya in khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi ee dhimashada iyo dhaawac ay labada dhinac ay jirto, iyo saanada ciidan ee labada Ciidan kala qabsadeen.
Khasaaraha gaadhay Maamul gobolleedka Puntland.
Dhimasho 54 Askari oo ay ku jiraan lix taliye halka warar xoogani sheegayaan in isna uu dhimashada ku jiro taliyahii Ciidanka Daraawiishta
70 Askari oo dhaawac ah
31 Maxbuus waa laga qabtay
8 Gaadhi waa laga gubay
14 gaadhi oo laba kaari yihiin waa laga qabsaday
Khasaaraha Somaliland la Gaadhsiiyay
12 Askari oo dhimasho ah oo uu ku jiro hal saarkaal
19 Dhaawac ah
Laba gaadhi oo laga gubay oo mid ka mid ah ay ku naf waayeen shan Askari oo saarnaa
Hal Beebee oo laga qabsaday Somaliland.
Geesta kale labada dhinac ayaa kala sheegaya guulo ay ka gaadheen dhankooda,waxaana adag in la ogaado khasaaraha dhabta ah ee ka dhashey weerarkaasi shaley.